आहा रारा गोल्डकप फुटबल : सहारा क्लब पोखरा र कथा नेपालबीच सम्झौता, प्रतियोगिताको लाइभ देखापढीबाट गरिने
काठमाडौँ। आहा! रारा गोल्ड कप प्रतियोगिताको १८ औँ संस्करणको अडियो भिडियो अधिकारका लागि सहारा क्लब पोखरा र कथा नेपाल प्रा.लि.बीच सम्झौता भएको छ।
आज दुवै पक्षले एक वर्षका लागि सहकार्यको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सहारा क्लब पोखराका तर्फबाट अध्यक्ष केशवबहादुर थापा र कथा नेपाल प्रा.लि.का तर्फबाट मनोजराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन्। यसका लागि कथा नेपाल प्रा.लि.ले सहारा क्लब पोखरालाई पाँच लाख रूपैयाँ नगद प्रदान गरेको जनाइएको छ।
कथा नेपाल प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित देखापढी डट कमले यस प्रतियोगिताको प्रत्यक्ष प्रशारण गर्नेछ।
विदेशी टिमसहित ‘ए’ डिभिजन लिगका क्लब, मोफसलका क्लब र आयोजक सहारा क्लब पोखराले प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। गत वर्ष मनाङ्ग मर्स्याङ्गदी क्लब विजेता र नेपाल पुलिस क्लब उपविजेता रहेको थियो।
क्याराभान गोल्ड कपबाट सुरु भएको मोफसलकै सबभन्दा प्रतिष्ठित प्रतियोगिता पछिल्लो १९ वर्षदेखि ‘आहा! रारा गोल्ड कप’ को नाममा सञ्चालन हुँदै आएको छ। प्रतियोगिताको १९ औँ संस्करण २०७७ साल चैत्र १७ गतेदेखि चैत्र २८ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ।
प्रकाशित: सोमबार, फागुन १०, २०७७ १५:३५
सहारा क्लब पोखराका तर्फबाट अध्यक्ष केशवबहादुर थापा र कथा नेपाल प्रा.लि.का तर्फबाट मनोजराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन्।
विदेशी टिमसहित ‘ए’ डिभिजन लिगका क्लब, मोफसलका क्लब र आयोजक सहारा क्लब पोखराले प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।